MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 895
Ashin Okkahta (Sar Linka) - Essay
>Tu Maung Nyo - Burma New Civil War accordance with Regime's 2008 Constitution
>Zay Hmine - The Green Poem
>အမေနဲႚ သား(သိုႚ) &quot;သ&quot; ၀ဂ်ကထာ
>Saung Yun La - Dates
>commercial for Thadingyut period
>Cartoon Saw Ngo - Security of Daw Suu
ကာတွန်း ဘီရုမာ ● အဲ့ဒါ လက်နက်မှု ... ဖမ်း .. ဖမ်း ...
>Maung Sein’s cartoon – 01
> ကာတွန်းမောင်စိန်ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ (မူရင်း – ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈) No tags for this post. Related posts No related posts.
> အပြောင်းအလဲများသည့် ထိုင်းနိုင်ငံမြင်ကွင်းဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျသည့်သတင်းကြောင့် အောင်ပွဲခံ ပျော်ရွှင်နေသော ဆန္ဒပြသူများ။ သိမ်းပိုက်ထားသည့် လေဆိပ်မှ ဆုတ်ခွာပေးမည်ဟု ၎င်းတို့က ကြေညာလိုက်သည်။ (အပေါ်ပုံ) ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဘန်ကောက်မြို့တော်တွင် တပ်မတော်သားတို့၏ သစ္စာခံ၊...
>The Moon and2Stars Smiling over Burma
> မြန်မာပြည်မှာ မနေ့ညက ကြယ်နဲ့လ သာပုံ ထူးဆန်း မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့ည ရန်ကုန်အချိန် ၆ နာရီခန့်က ကောင်းကင်ယံတွင် လခြမ်းကွေးက ပြုံးနေသည့်...
> လူထုဒေါ်အမာ ၉၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုစာ ကဗျာများ နှင်းဆီလွင်ပြင်စာပေအဖွဲ့က ပြည်ပတွင် အခမဲ့ အင်တာနက်စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ပြည်ပရောက်...
>Ludu Daw AMar 93 Birthday Charity at Mandalay
> အမေ လူထုဒေါ်အမာ ၉၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ မန္တလေးမှာ စည်ကားစွာ ကျင်းပ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ မန္တလေးမြို့နဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ကျက်သရေဆောင်...
>30th Nov 2008 – Sunday Weekly Radio Program
> မိုးမခရဲ့ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ သီချင်းဆို၍ ငိုရသည် – ခင်ညွန့်ရီ သာသနာ့ဥသျှောင်ဥက္ကဋ္ဌ ပီနန်ဆရာတော်ရဲ့ တရား/ မတရားကောက်နှုတ်ချက်-Burma သတင်းပဒေသာ၊ သီချင်းပဒေသာ ပန်တျာတေး/ကြော်ငြာအရေး သူလိုလူစားရှာမှရှား...
>Quotes for November, 2008
> နိုဝင်ဘာလ စာကိုး စကားကိုး ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ကျွန်တော် အမေရိကားက ပြန်လာတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အသိ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်က “ဟဲ့..နင် အခုမှ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတယ်ဆို။ AIDS...
>Khin Myo Chit – What Jataka teach us
> အစဉ်ခေတ်မှီနေသော ငါးရာ့ငါးဆယ် ခင်မျိုးချစ် နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တော် ၀တ္ထုများကို ကလေးဘ၀ကမိဘဘိုးဘွားခွင်ထက်မှာ ကြားနာခဲ့ကြရတယ်။ စေတီပုထိုးများမှာပန်းချီပန်းပုများနှင့် သရုပ်ဖော်ထားတာတွေကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ ကလေးဘ၀တွင် အငြီးပြေသဘောလောက်သာမက လူ့ဘ၀တလျှောက်လုံး အသုံးဝင်သည့်...
>Government supporters rally in Thailand against protest alliance
> အခြေအနေ တင်းမာနေဆဲဖြစ်သော ဘန်ကောက်မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံသတင်းဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ရဲတပ်ဖွဲ့ဂိတ်စခန်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်သို့ရောက်လာပြီး ဆန္ဒပြသူများထံ အားဖြည့်ပူးပေါင်းသူများ။အင်္ကျီအ၀ါဝတ် အစိုးရဆန့်ကျင်သူများက ဘန်ကောက်ရှိ လေဆိပ်ကြီး နှစ်ခု နှင့် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးကို သိမ်းပိုက်ထားဆဲဖြစ်သည်။...
>Burmese in NYC host Burmese Literary Talk
> နယူးယောက်က မြန်မာများက စာပေဟောပြောပွဲကျင်းပကြ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၇ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ၈ ကြိမ်မြောက် မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲကို အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့၊ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်အနီးရှိ UN Plaza...
>2010 US Census for Burmese – second community meeting at the bay area
> ၂၀၁၀ အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းတွင် မြန်မာတို့စာရင်းပေါက်ရေး ၀ိုင်းဝန်းကြရန် ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေး မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့က ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာဒေသ ဒေးလီးစီးတီး ဂျက်ဖာဆန်...
>Mar Mar Aye 255
> အသံနားဆင်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၅)တန်ဆောင်မုန်း၊ တန်ဆောင်တိုင်မာမာအေးနိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ...
>Thailand Airport Will Stay Shut
> အစိုးရဆန့်ကျင်သူများ ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကို ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈သံတုတ်ကိုင်ပြီး လုံခြုံရေးယူထားသည့် ဆန္ဒပြသူအချို့။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူများက လေဆိပ်ကြီး၂ခုကို သိမ်းပိုက် ပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဘန်ကောက်မြို့ သုဝဏ္ဏဘူမိ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အနီးသို့ရောက်လာသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အား ဆန္ဒပြသူများက မောင်းထုတ်လိုက်သည်။...
>Aung Way – 18
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (၁၈) အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ‘ရန်သူဆန့်ကျင်ခံရခြင်းဟာ ကိစ္စဆိုးမဟုတ် ကိစ္စကောင်းဖြစ်တယ်’ ပုသိမ်အကျဉ်းထောင်ရဲ့ နံနက်ခင်းတခုမှာ ကျနော်၊ ကျနော်နဲ့အတူ အဖမ်းခံနေရတဲ့ NLD လူငယ်တွေကို အားပေးစကား ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့...
>India ends Mumbai rampage after 60 hours, 195 dead
> ဘုံဘေတိုက်ပွဲပြီးဆုံးဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း သေဆုံးသွားသူ ဘုံဘေမြို့ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ဈာပန။ဗုံးခွဲပစ်ခတ်ခြင်း၊ ဓားစာခံများဖမ်းဆီးထားခြင်း စသည့် လုပ်ရပ်များကို လက်နက်ကိုင် လူငယ် ၁၀ ဦးက လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့နှင့် ၃ ရက်ကြာ ၃...
> ဘီလီရဲ့အိမ်ကလေး စိုးသင့်ဆွေ နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဘီလီ တယောက် ပရမ်းပတာ လှုပ်ခါရမ်းနေတဲ့ အလုံပိတ်ကုန်တင်ကား အသေးလေးရဲ့ နောက်ခန်းမှာ ငိုက်မြည်းရင်း လိုက်ပါလာတယ်။ ကားကို မောင်းနေတာက သူ့ရဲ့ ကြီးကြပ်ရေးမှုး...
>Rangoon Workers losing jobs, turn into begging
> အထွေထွေ အကြပ်အတည်းကြောင့် ရန်ကုန်အလုပ်သမားများ အလုပ်လျော့ချခံရ၊ တောင်းရမ်းစားသူများ တိုးလာဟု ဆို ညွန့်ထွေး နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ နိုင်ငံတကာမှာ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းများ ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာ ရန်ကုန်မှာလည်း အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ တိုးလာပါတယ်။ ကြံရာမရတဲ့အဆုံး...
>Golden Triangle Part 4
> အဆိပ်အတောက် ရွှေတြိဂံ ရှင်းတမ်း တရုတ် စာနယ်ဇင်းသမားများ ရေးသည်။ ဖြူစင် ဘာသာပြန်သည်။ အခန်းဆက် ဘာသာပြန် မှတ်တမ်း – ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အပိုင်း (၃)...
>Kyi Aung’s poem – 001
> မိုးခေါင်တောက စစ်မောင်းသံကြည်အောင်နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ နွေဦးတစ်ထောင်၊ သံပူရောင်နဲ့မိုးခေါင်တောဆီ တပ်ကြီးချီ။ ဒဟပ်နဲ့ငု၊ တပ်သစ်စုကြပွင့်နုမညိုး၊ ပန်းမျိုးကုဋေစစ်ခြေ ခိုင်မြဲ၊ စစ်ပွဲအားမာန်တော်လှန်ရိုက်ကျူး ရဲရဲဖူး။ နွေးဦးစစ်ကွက်၊ မီးလျှံစက်လည်းတပ်ပျက် ဆုတ်ခွာ၊ ခယောင်းယာထဲငုဝါအောင်ပွဲ၊ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ။...
>Mar Mar Aye Foundation to Host Fund Raising Event
> ‘မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း’ ရန်ပုံငွေပွဲ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ တွင် ပြုလုပ်မည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၄နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အသက် ၆၆ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် တေးသံရှင် မာမာအေး က...
>November born Ludu Daw Ahmar
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၆)နိုဝင်ဘာ မွေးနေ့ရှင် လူထုဒေါ်အမာထိန်လင်းနိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ဟာ အမေ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ အမေ သက်ရှိထင်ရှားရှိဦးမယ်ဆိုရင် အမေ့ရဲ့ ၉၃ နှစ်ပြည့်...
>Win Tun’s cartoon 001
> ကာတွန်းဝင်းထွန်းနိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ (မူရင်း – ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၅ သြဂုတ်လ) No tags for this post. Related posts No related posts.
> ထောင်ဝင်စာအောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မောင်ရေ …ထောင်တွေဟာ အောင်မြေပါပဲကွယ်။ ကောင်းကင်တနန်းကျောင်းသင်္ခမ်းမှာဒေါင်းအဆင်ဆန်းတွေနဲ့ပ၀ါအလံ ထူရမယ်။ တုတ်ရရ၊ ခဲရရလှံရရ၊ ဓားရရရသမျှနဲ့တရားမမျှတတဲ့နအဖကိုထထကြွကြွ‘ချဟ … ချဟ’ လို့ရှုတ်ချကြ ဖြုတ်ချရမယ်။ မောင်ရေ …ထောင်တွေဟာ အောင်မြေပါပဲကွယ်။...
>Moe Cho Thin – Never Ending Story
> မဆုံးတဲ့ အလွမ်း မိုးချိုသင်း နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ အခုတလော စာမရေးဖြစ်တာကြာပြီ။ ကြားရတဲ့သတင်းတွေကလဲ မကောင်းဘူး။ ၆၅ နှစ်တဲ့၊ အနှစ် ၂၀ တဲ့၊ ၄၅ နှစ်တဲ့။ အမိန့်ချတဲ့လူတွေတောင်...
>Thailand’s army calls for new elections
> ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြကြဆဲ၊၀န်ကြီးချုပ်အသစ်ကလည်း နှုတ်ထွက်မည်မဟုတ်ဟုဆိုဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၃ လ ကျော်ကြာ အစိုးရကို ဆန္ဒပြနေသူ အများအပြားက သုဝဏ္ဏဘူမိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီးကို ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များ ပျက်သွားပြီး...
>Mumbai under attack
> ဘုံဘေအကြမ်းဖက်မှု အဆုံးမသတ်သေးဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော် မွမ်ဘိုင်း (ဘုံဘေ)တွင် ယမန်နေ့ညက စတင်ခဲ့သည့် ဗုံးခွဲ၊ ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် အနည်းဆုံး သေဆုံးသူ ၁၀၁ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၂၈၇ ဦး...
>Zarganar awarded with "Freedom to Create" Prize
> ဇာဂနာကို “လွတ်လပ်စွာ အနုပညာဖန်တီးခွင့်” ဆု ချီမြှင့် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂၊ ဓာတ်ပုံ – နာရီ နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ယနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့မှာ...
>Burmese in LA host Burmese Literary Talk marking 88 th National Day
> အယ်လ်အေ အမျိုးသားနေ့ စာပေဟောပြောပွဲ စည်ကား မိုးမခ၊ ဓာတ်ပုံသတင်း (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ၊ ငယ်ဦးမွန်) နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက အမေရိကန်ပြည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသ၊ အယ်လ်အေမြို့ရောက်...
>the art of dancing
> ဘိရုမာတင်တဲ့ ရွှေမင်းသားများ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ပရိသတ်များရွေးချယ်သည့်ကကွက်အတိုင်း ကပြအသုံးတော်ခံမည့် ဖျော်ဖြေပွဲအစီအစဉ်ကြီးတခုကို မိုးမခတွင် ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ “၂၀၁၀ အကြို စိန်မျောက်မျောက်တို့ ကတဲ့ပွဲ” ဟု အမည်ပေးထားသော...
>Cartoon Beruma – 2010 Welcome Performance – Monkey Dance
> ကာတွန်း ဘီရုမာ – ၂၀၁၀ အကြို စိန်မျောက်မျောက်တို့ က တဲ့ပွဲ၊ သရုပ်ဆောင် သန်းရွှေနဲ့ မောင်အေး၊ ဒါရိုက်တာ – သင် ကိုယ်တိုင်ပါပဲ နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈...
Page 895 of 952«1...893894895896897...952»